I-Ultrasonically Thuthukisa ukuhlukaniswa kwezigaba ezintathu - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukuhlukaniswa kwesigaba sesithathu (TPP) kuyindlela yokukhipha, ukuhlukanisa nokuhlanza izingxenye, isib. I-lipids, ama-enzyme, i-polysaccharides nezinye izinto eziphilayo.
I-ultrasonically yasiza ukwahlukana kwezintathu ezintathu kune-TPP evamile ngesivuno esiphezulu, ukuhlanzeka okuthuthukile kanye nejubane elihlukile.
I-ultrasonic TPP isebenza ezincwadini ezincane nezinkulu futhi ingafakwa kalula ekukhiqizeni izimboni.
I-Ultrasonic Three-Phase Partitoning
Ukuhlukanisa ngezigaba ezintathu
I-phase-phase divisionitioning (TPP) iyindlela elula futhi ephumelelayo yendlela eyodwa yokuhlukanisa, ukuhlanzwa nokuhlushwa kwe-biomolecules ezinjenge-enzyme, lipids, i-polysaccharides njll kusuka ekuxukeni okuyinkimbinkimbi.
I-TPP yenziwa ngokungezwa okulandelanayo okwanele kasawoti (ngokuvamile i-ammonium sulphate) kanye ne-solvent (ikakhulukazi t-butanol /tert-butanol). Amanoni afana ne-ammonium sulfate asetshenziselwa ukugcwalisa okwenziwe nge-saturation ukuze kunciphise amaprotheni. I-solvent ephilayo njengokufana t-butanol yengezwa ukwakha izingqimba ezintathu zesigaba nokukhipha izakhi ezincane zamathambo ezinjenge-lipids, ama-phenolics kanye namanye ama-detergents. Kusukela t-butanol inephuzu eliphakeme lokubilisa, kepha lingaphansi kokushisa kune-ethanol ne-methanol, t-butanol yi-solvent ekhethiwe ye-TPP.
Ngemuva kokwelashwa kwe-extract engcolile kanye ne-decantation, ingxube ihlukanisa ngezigaba ezintathu ezihlukene: i-solvent engenhla (t-butanol) isiqukethe ama-non-polar compounds, ahlukaniswe nesigaba esiphansi sama-aqueous (aqukethe amaphilisi e-polar) nge-protein yokufiphaza. Amaphrotheni ayifunayo ahlukaniswa ngokukhetha kwesigaba esisodwa kanye namanye amaprotheni angcolile kwesinye isigaba. Lokhu kubangela ukuhlanzwa okuyingxenye kanye nokuhlushwa kwamaprotheni. Inqubo yokucubungula ukuhlanganiswa kwe-kosmotropic, i-salting out, i-cosolvent isotonic ne-osmolytic precipitation yamaprotheni.
I-TPP Enamandla Ethuthukisiwe
I-Sonication iqinisa inqubo ye-TPP kakhulu. I-TPP esiza nge-Ultrasonically isetshenziswa ngempumelelo ekuhlukaniseni nasekuhlanzweni kwama-biomolecule. Uhla lwama-biomoelcule ahlukaniswe kahle ngesikhathi esifushane. Isibonelo, ama-enzyme avela ezitshalweni (isib. Bromelain, papain, invertase, polyphenol oxidase ne-trypsin inhibitors), izilwane (isib. Trypsin, α-chymotrypsin, chymosin, pepsin ne-luciferase) kanye nama-virus (isib. Lipase, α-amylase, cy-galactosidase) I-serratiopeptidase, i-cyclodextrin glycosyltransferase, kanye ne-encymeti ye-fibrinolytic) yahlanzwa nge-TPP ye-ultrasonic. Inzuzo eyengeziwe ye-TPP ye-ultrasonic umsebenzi othuthukisiwe wama-enzyme ahlukahlukene, okuholela ekuvelweni okuphezulu okubonakalayo (>100%) ngoba i-enzyme ebhekisiwe noma iprotheni ingena ungqimba ophakathi nendawo kwezigaba eziphilayo.
I-ultrasonic TPP ingasetshenziswa ngokuphumelelayo ngamasampuli angcolile futhi ingafakwa kalula.
I-Sonication ithuthukisa ukuhlukaniswa kwesigaba sesithathu ngokuphawulekayo futhi kubangelwa ukuvunwa okuphakeme kanye nokuhlanzeka ngesikhathi esifushane kakhulu senqubo.
for lab kanye nembonini
I-ultrasonic TPP ye-extraction ye-astaxanthin
Ukukhishwa kwe-astaxanthin (AX), ukwelashwa okuhlanganyelwe kwe-TPP nokukhulisa nge-Hielscher's UP400S akuyona nje kuphela i-elula elula esebenzayo, kodwa futhi futhi inqubo ephumelelayo kakhulu ukuhlukanisa i-AX kusuka ku-biomass ye-bacteria ye-Paracoccus NBRC 101723. Ukuhlukahluka kokusebenza kwe-sonication kungenziwa kahle ukuze uthole imiphumela emihle yokukhipha. Ama-ultrasonic processing parameters auch njenge-amplitude, isikhathi, izinga lokushisa kanye nesitokisi (isayizi, ukuma) kanye nobukhulu bezinhlayiyana ze-biomass, kuthinta ukukhululwa kwe-ultrasonic kwe-AX kusuka ku-biomass kakhulu. I-Ultrasonication ye-biomass emanzi inikeza imiphumela engcono kune TPP ye-ultrasonic ye-biomass eyomile yokufakelwa okusheshayo nephumelelayo kwe-AX. I-TPP ye-ultrasonic iholela ekutholeni okungaphezulu kwe-37% ephakeme kwe-AX kune-extraction evamile yokusungula. (cf. Chougle et al. 2013)
I-Ultrasonic TPP yokuhlukaniswa kwe-andrographolide evela ku-Andrographis paniculata
I-Andrographolide iyinhlangano ye-labdane diterpenoid, ebizwa ngokuthi i-anti-inflammatory, antioxidant, i-hepatoprotective, i-anti-carcinogenic kanye ne-anti-diabetes. Ucwaningo oluqhathanisa lubonisa ukuthi i-TPP ye-ultrasonic ayikwenyanga nje isivuno se-andrographolide kodwa iphinde ithuthukise umsebenzi we-antioxidative uma kuqhathaniswa ne-TPP evamile.
Ukusebenza okuphezulu kwe-Ultrasonic Processors
I-Hielscher Ultrasonics iyazikhethela ekuklanyeni nasekukhiqizeni izinhlelo eziphezulu ze-ultrasonic ze-extraction kanye nezinye izinqubo eziningi.
Ibanga lethu lomkhiqizo lihlanganisa amancane, amadivayisi anamathuluzi anamandla, ezinamandla ze-bench-top ultrasonicators kanye izinhlelo eziphezulu zokusebenza ezimbonini. Okuhlukahlukene Izesekeli vumela i-adaption ekahle yesistimu ye-ultrasonic kuya ezidingweni zakho ezithile zokusebenza. Wonke ama-ultrasonicators ama-Hielscher akhiwe ngomsebenzi we-24/7 ngaphansi komthwalo ogcwele.
Okuhlangenwe nakho kwethu isikhathi eside ekusetshenzisweni kwe-ultrasonic kusivumela ukuthi sixoxisane namakhasimende ethu ekuhlolweni kwawo kokuqala nge-ultrasound ngokusebenzisa izinyathelo zenqubo yokusebenza nokwenza kusetshenziswa izilinganiso zezimboni.
Sicela usebenzise ifomu ngezansi ukusitshela ngenqubo yakho! Siyajabula ukuncoma ukuthi sixoxe ngamathuba nezinzuzo ze-sonication kwesicelo sakho.
Imishini esebenzayo futhi enokwethenjelwa ye-ultrasonic kusukela ebhodini kuya esikalini semakethe.
UChougle, JA: et al. (2013): I-Ultrasound isize ukwahlukaniswa kwezigaba ezintathu (UATPP): Indlela yamanoveli eyenzelwe ukukhipha i-astaxanthin eParacoccus NBRC 101723. CSBE / SCGAB 2013 – Annual Conference University of Saskatchewan, Saskatoon, 7-10 Julayi 2013.
Ketnawa, S. et al (2017): Isigaba sokuhlukanisa ukuhlukaniswa kwe-enzyme: Ukubuka konke kanye nezinhlelo zokusebenza zakamuva. I-International Food Research Journal 24 (1), 2017. 1-24.
UVarakumar, S. et al. (2017): Isiqhamo esithuthukisiwe se-oleoresin esivela ku-ginger (i-Zingiber officinale) i-rhizome powder esebenzisa i-enzyme-esasizwa ngezigaba ezintathu zokuhlukanisa. I-Chemistry yokudla 216, 2017. 27-36.
Yan J.-K. et al. (2018): I-Ultrasound isebenzisane ngezigaba ezintathu zesigaba sokuhlukanisa nokuhlukaniswa kwe-Corbicula fluminea polysaccharides nezinqubo ezifanelekayo. Ultrasonics Sonochemistry Vol. 40, Ingxenye A, 2018. 128-134.
I-Part-Phase Partitioning (TPP)
I-TPP iyindlela yokwenza izinto, ngokusekelwe ekuhlukaniseni izingxenye ze-polar, amaprotheni, nama-hydrophobic ezigaba ezintathu ezihlanganisa amanzi, i-ammonium sulphate ne-t-butanol.
Izakhi ezinomsoco ezibalulekile kanye nezimboni (isib. Α-galactocidase, α-amylase inhibitors, kanye ne-protease) nezinhlanganisela zemvelo (isib. I-diterpenes efana ne-forskolin ne-andrographolide) zihlanzwa yizigaba ezintathu zokuhlukanisa. Nakuba izingulube, i-lipids kanye ne-enzyme inhibitors ziqoqa esigabeni esingenhla se-solvent, esahlukaniswa nesigaba esiphansi sama-aqueous, lapho kuhlanganiswa khona izingxenye ze-polar ezinjenge-saccharides, ngezingqimba ezinamaprotheni eziphakathi. Kusukela t-butanol ibopha amaprotheni akhankanywe yi-TPP, okwenzeka njengama-protein-t-butanol coprecipitates, afaka phakathi kwezingqimba eziphilayo futhi aqueous futhi angahlukaniswa kalula futhi ahlanzeke. Ngokuvamile, ama-biomolecules atholakala ngendlela ehlanzekile e-interphase, kuyilapho izidakamizwa ikakhulukazi zihlukanisa t-butanol (isigaba esiphakeme) nasesigaba se-aqueous (isigaba esiphansi).
I-Astaxanthin (3, 3'a-dihydroxy-ß, ß-carotene 4, 4'-dione) yi-keto-carotenoid engeyoyesigaba se-terpenes. Njengoba i-tetraterpenoid yakhiwa kusuka kwangaphambi kwekhabhoni eyisihlanu, isopentenyl diphosphate, ne-dimethylallyl diphosphate. I-Astaxanthin ingulube yesitshalo ephuzi-orange futhi ngenxa yalokho ihlukaniswe njenge-xanthophyll. I-Astaxanthin itholakala ikakhulu kuma-microalgae, imvubelo, ama-salmonoid, i-trout, i-krill, i-shrimp, i-crayfish kanye nama-crustaceans. Njengomuntu onamandla amakhulu we-scavenger, umvikeli wesikhumba, i-anticarcinogenic futhi okhuthaza izivikeli mzimba, i-astaxanthin isetshenziswa njengokwengezelela futhi njengokwengeza ekudleni, ekhemisi nasezimonyo. I-Ultrasonic TPP ithuthukisa inqubo yokukhishwa nokuhlukaniswa kwe-astaxanthin emithonjeni yemvelo futhi yenza ukukhiqizwa kwayo ngokwezomnotho kusebenza ezingeni lezimboni.
I-UIP1000hdT – 1kW ultrasonicator yezimboni